युगसम्बाद साप्ताहिक - कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ?
Thursday, 04.09.2020, 06:57am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 06.07.2011, 01:03pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । संविधानसभाको तीन महिने म्याद थपिएको दश दिन पूरा भैसक्यो । तीन दलका शीर्ष नेताहरूले शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियालाई खासै अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय सरकारको खाका अझै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यो तरल वातावरणमा सत्ताको सपना देख्नेहरू प्रमुख तीनवटै दलहरूभित्र सल्बलाइरहेका छन् । एनेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्ने सह्रानीय काम गरेर आफूमाथि थोपरिएको आशंका न्यून गरेको छ । सेना समायोजनको खाका तयार नभैसके पनि माओवादी यसमा पनि निकै लचकदार हुने संकेतहरू छन् । माओवादीकै कारणले शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियामा अवरोध खडा भएको आरोप विस्तारै हट्दै छ । तर पनि राष्ट्रिय सरकारका निम्ति सहमतिको वातावरण सहजै बन्नसक्ने अझै देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामाको माग भैरहे पनि सर्वस्वीकार्य विकल्प प्रस्तुत हुन सकेको छैन । मुलुक नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्षामा रहेको भए पनि कुन दलको को प्रधानमन्त्री भन्ने सवाल जटिल बन्दैगएको राजनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार शान्ति र संविधानको बाटो खुला गर्न अपरिहार्य नै छ तापनि प्रमुख तीन दलभित्र कुन दलका कुन नेताको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने भन्नेबारे गहन छलफल हुनै सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल आउनुपर्ने धारणामा हुनुहुन्छ भने उपयुक्त विकल्प खडा नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न नहुने धारणा राख्नेहरू माओवादी र कांग्रेस दुवैतिर छन् । प्रधानमन्त्रीका निम्ति पालो कुरेर बसेको नेपाली कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको महत्वकांक्षा जागृत अवस्थामा नै छ । उता माओवादीभित्र भने कमरेड प्रचण्ड यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक नरहनुभएको भन्दै डा. बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चा प्रसङ्गमा निकै आउन थालेको छ । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने निश्चित भएपछि मात्रै माओवादीले व्यक्तिको चयन गर्ने कुराहरू पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्व नयाँ दिल्लीलाई मञ्जुर नहुने ठानेर नै उहाँ पछाडि सर्नुभएको र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम स्वीकार्य व्यक्तित्वका रुपमा चर्चित भएको पनि अनुभूत हुँदैछ । तर माओवादीभित्रै भने डा. भट्टराई सर्वस्वीकार्य वैकल्पिक नेतृत्व बन्नसक्ने सम्भावना क्षीण प्रतीत छ । माओवादीभित्रै महासचिव रामबहादुर थापा र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रक्षेपित हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिइसक्नुभएको नभए पनि यो सरकारलाई कामचलाउकै हैसियतमा रहेको प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा गरे पनि नगरे पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय सरकार बनाउन सहमति कायम हुनासाथ यो सरकारको आयु टुङ्गिने निश्चित छ । मुलुकलाई सधैं अनिश्चय र अन्योलको वातावरणमा अल्झाइरहनुभन्दा तीन दलका नेताहरूले पाँच बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउनु नै अहिलेको जिम्मेवारी हो । प्रमुख दलहरूका सामु अहिलेको प्रमुख कार्यभार भनेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउनु नै हो । यी दुवै काममा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । शान्ति र संविधानमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नासाथ त्यो सहमतिले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठनको बाटो खुलाउने छ । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे राष्ट्रिय सहमतिको खोजी नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुरा यो प्रसङ्गमा खासै महत्वको विषय नहुनुपर्ने थियो तर सत्ताको फोहरी खेलमा ठूला दलका नेताहरू अल्झिएपछि राष्ट्रिय जिम्मेवारीका पक्षहरू नै गौण बन्न पुगिरहेका छन् । संविधानसभाको तीन वर्षको कार्यकाल सत्ताकै खिचातानीमा अल्झिएर अपव्यय भयो । तीन महिने म्याद थपको अन्तिम अवसर पनि नेताहरूले यसरी नै गुमाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता अझै निवारण हुन सकेको छैन । बाह्य शक्तिका रणनीतिक खेलहरू पनि यो प्रसङ्गमा उत्तिकै चर्चित छन् । संविधानसभाको म्याद सकिनै लागेको बेलामा दिल्लीका जासुसहरूले काठमाडौं त्यसै डेरा-डण्डा जमाएका थिएनन् । भोलिका दिनहरूमा पनि परचक्रीको स्वार्थ नराम्रोसंग मडारिइरहने पर्याप्त संकेतहरू छन् । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले सहमतिको गाँठो कसिलो बनाउन सकेनन् भने राष्ट्रिय राजनीति फेरि पनि दुर्घटनाकै बाटोतिर धकेलिने आशंका अझै व्याप्त छ ।